Showroom Sales Archives - Glory Assumption Space
Showroom Sales- Male/Female (5) Posts
Salary Rang : 1500000
6. Showroom Sales - Male/ Female (5) Posts / Salary- 150,000 Kyats (Negotiable)/Bahan Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀) နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Electronic အရောင်ပိုင်းအားစိတ်ဝင်စားပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။